यी १० लक्षण देखिए बुझ्नुस् क्यान्सर लाग्दै छ !यी १० लक्षण देखिए बुझ्नुस् क्यान्सर लाग्दै छ ! |
यी १० लक्षण देखिए बुझ्नुस् क्यान्सर लाग्दै छ !यी १० लक्षण देखिए बुझ्नुस् क्यान्सर लाग्दै छ !
क्यान्सरले ज्यान लिन्छ । चाहे तपाइँ धनी हुनुहोस् या गरिव । हुने खाने होस वा हुँदा खाने क्यान्सरले छोड्दैन । तर क्यान्सरको शुरुवाती कालमा चाल पाइयो भने आफूलाई बचाउँन सकिन्छ । तर सामान्यतः अधिकाँश मानिसले यस्ता शुरुवाती लक्षणलाई वेवास्ता गर्ने गर्छन् ।हुनत यो बढाइचढाइ जस्तो पनि लाग्न सक्छ । विज्ञहरुका अनुसार क्यान्सरको शुरुवातीकालमा निम्न लक्षण देखिन्छन् ।
१- निरन्तर खोकी- फोक्सोको क्यान्सर
२- शरीरमा भएका मुसाको रंगमा परिवर्तन- स्किन क्यान्सर
३- दिसामा रगत, दुखाइ- आन्द्राको क्यान्सर
४– मुख भित्र सन्चो नहुने घाउ- धेरै प्रकारका क्यान्सर
अमेरिकी क्यान्सर उपचार केन्द्रका अनुसार मुख भित्र घाउ देखिनु र सन्चो नहुने भयो भने क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ । यसलाई मुखको क्यान्सर भनिन्छ ।मुखको क्यान्सर भएपछि मुख भित्र भएका साना साना घाउ हप्तौं वा महिनौं सम्म सन्चो हुँदैनन् । दुखाइ नभएपनि यस्तो घाउ रहिरहने समस्या क्यान्सरको लक्षण हो ।
५- निल्न समस्या- खाना नलिको क्यान्सर
६- रहस्यमयरुपमा वजन घट्नुः धेरै प्रकारका क्यान्सर
अधिकाँश क्यान्सरको साझा लक्षण मानिन्छ वजन घट्नु । यदि तपाइँको शरीरमा रहस्यमयरुपमा वजन घटिरहेको छ भने यो विभिन्न क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ।अमेरिकी क्यान्सर सोसाइटीका अनुसार वजन घट्नुको कारण खुल्न सकेन भने यो क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ ।
७- पिसावमा रगत- प्रोष्टेट क्यान्सर
८- अनावश्यक टुडुल्को उठ्नु
९- रहस्यमय दुखाइ- धेरै प्रकारका क्यान्सर
१०- दिसा/पिसावमा रगत- गुदद्वार क्यान्सर